Meet Jack Russell terrier A Dog in One Pack - News Fitsipika
Meet Jack Russell terrier A Dog in One Pack
Izahay te-hahita ankapobeny namany, izay hanome antsika ny ankamaroan'ireo soa mieritreritra isika no mila. tsara, Raha mitady ny amboa izany dia toa ny iray-in-fonosana Pal, mety hahita Jack Russell Terriers mahaliana ampy.
Io alika manana tantara izay toa nisy feo avy mba hahatonga ny specie.
Nisy nilaza fa ny mpiompy alika ity, tanora Teôlôjianina mpianatra ny atao hoe John amin'ny Oniversiten'i Oxford Russell, indray mandeha nihaona tamin'ny milkman amin'ny fotsy terrier izay manana mangirana eo ny masony sy ny sofiny.
Io alika tonga liana izay hita taty aoriana fa ny fototry ny fanatodizan'ny vaovao mikotrika alika fa maro no nianatra ho tia tahaka ny biby fiompy.
Ny alika dia voalohany hitako dia atao hoe “Trump” izay hafa 60 karazana terriers ireo tatỳ aoriana niteraka avy.
Miaraka amin'ny terrier ny fototra maha mba handeha sy ny tany (terrier teny an-dalana avy amin'ny teny Latina “Terra” izay midika hoe eto an-tany), Jack Russell terriers koa ny fironana mihaza sy scour ny fihazana.
Noho izany, tokony homena ampy fisehoana ankapobe, mba Niainga izy ireo hanangona ny vovoka avy nandavaka tany mba handevina na ny harena, na mba hahasitrana nitandrina harena nafenina hatry ny ela.
An tsara ratter, Jack Russell Terriers manaporofo ny ho tsara “housekeepers” satria foana ny ankamaroan'ny voalavo an-trano.
Jack Russell terrier (sary: Wikipedia)
Izay mety ho ratsy vintana voalavo izay mitranga mba ho ao anatiny ny vazan ity terrier azo antoka ny hihaona ny vetivety loza. Noho izany, mahita ny tenany amin'ny tompony na ny alika sy ny saka amin'ny iray Pal.
Iray fototra toetra io alika dia ny toetra manoloana ny olon-kafa. Afaka mahatakatra ny mora foana, izay tsy maintsy nitandrina lavitra ny tranony, ary iza no azo ekena ao an-trano.
Izany dia mahatonga azy ireo ihany koa ny toe-tsaina tsara watchdogs. Natao manokana izy ireo mba ho tia ady amin'ny preys.
Ary raha mety ho tena feo, maro amin'izy ireo ihany no barks rehefa mahita antony tsara ny.
Tsy toa masiaka aza. Fa indray mandeha izy ireo manimbolo fandrahonana, izy ireo dia afaka maneho eny masiaka izay mety manompo toy ny fampitandremana manoloana ireo hafa firenena.
Na izany aza, indray mandeha ny olon-kafa dia aoka ho ao an-trano ny tompon-, ny Jack Russell afaka efa handefitra ny na ny anatrehany.
Ity terrier ihany koa ny fianakaviana sy ny alika maniry ho an'ny olombelona namana. Ary ny fitiavany ny ankizy no be mahaliana.
Na izany aza, indray mandeha izy ireo nanararaotra na efa naseho dratsy fitsaboana, Mety ho iniana na tsy nahy, izy ireo dia afaka rehefa amin'ny alalan'ny fihetsika mahery setra.
Ny masiaka dia niseho koa ny tsy fisian'ny tahotra lehibe kokoa mankany amin'ny amboa, izay mety hitarika ho amin'ny indrisy ratra, ny sasany aza mety ho hahafaty.
Izy ireo ihany koa ny marika noho ny faharanitan-tsaina sy ny toe-tsaina tsara. Toetra ireo dia afaka ny ho tena azo dinihina ny te hahafanta-javatra amin'ny alalan'ny zavatra.
Noho izany, dia mitaky supplementation amin'ny fampiofanana ofisialy raha tsy afaka ny handefitra sarotra fitondrantena.
Ny zavatra tsara anefa amin'i Jack Russell dia afaka hiaiky fiofanana sy manao tsara eo amin'ny ankamaroan'izy ireo.
Raha ny tena izy, dia fantatry ny tompon-daka isan-karazany mampiseho ny peratra sy ny hafa mitovy fifaninanana.
The Hollywood niaiky ny toetra ireo koa alika.
Miaraka feisty sy ara-batana tsara toetra, Pal izany dia efa nanao anarana ao amin'ny efijery.
Raha Wishbone, Milo (avy amin'ny The Mask) ary Eddie (avy amin'ny Frasier) ampanenoy ny lakolosy eo aminao dia tsy misy isalasalana fa afaka mahafantatra izany alika.
Jack Russell tsara soa fisehoana ankapobe. Ny alika ny somary vitsy habeny, karazany izany tsy hamitaka anareo amin'ny bika aman'endrika zavatra ilaina.
Indrindra Rewatchable Movies
Fa filoham-pirenena, ny iPhone na Blackberry dia afaka ny ho ...
20829	0 Dog, Frasier, Jack Russell, Jack Russell terrier, John Russell, Oxford University, Pets, terrier
← Ny zava-misy TV Show naka sary tamin'ny Mars?! Mividy A Mountain Bike Guide →